Xubno ka tirsan G/Wasiirada oo maanta kormeeray furimaha dagaalka SAWIRRO | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > SOMALI NEWS, TFG Somalia	> Xubno ka tirsan G/Wasiirada oo maanta kormeeray furimaha dagaalka SAWIRRO
Xubno ka tirsan G/Wasiirada oo maanta kormeeray furimaha dagaalka SAWIRRO
Wednesday, June 1, 2011 Laaska News
Xubno ka tirsan golaha Wasiirada Soomaliya oo ay wehliyeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa kormeer hawleed kusoo maray goobo dhawaan ay ciidamadu ka qabsadeen Alshabaab oo ka tirsan Deg.Hodon iyo Hawl wadaag.
Xubnaha ka tirsan golaha Wasiirada Soomaaliya meelaha ay maanta kormeereen ayaa waxaa ka mid ahaa isgoyeska KPP, Masjidka Sh, Cali Suufi, xafadda Afrikan Village, barxadda Horseed , xero ruush ,qeybo ka mad ah Wadada Wadnaha, fagaaraha caanka ah ee Tarabuunka, iyo goobo kale.
Xubnaha Wasiirada ah ee maanta booqday furumaha hore ee dagaalka ayaa waxaa hogaminayey ku xigeenka R/wasaaraha Soomlaiya ahna wasiirka Gaashaandhigga mudane C/Xakiim Maxamuud Xaji Fiqi, iyadoo sidoo kale ay xubnihii la socday ay ka mid ahayeen W. Warfaafinta Bostada iyo Isgaarsiinta, mudane C/kariim Xasan Jaamac, Wasiirka Howlaha guud iyo Dib u dhiska C/rashiid Khaliif Xaashi, W/Dowlaha Difaaca Cabdi Maxamed Abtidoon, W/Dowlaha Caafimaadaka Mudane Maxamuud Sh, Xasan Akhi, W/dolaha Wasaaradda Howlaha guud iyo dib u dhiska Feysal Cumar, Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Gen. C/kariim Yuusuf Aaden Dhego badan iyo Injineerrio ay dowladdu ugu talo gashay inay qiimeeyaan goobaha uu burburku gaaray si loo dayac tiro.
Xubnaha wasiirada ah aya awaxa ay warbixnno ka dhageyteen saraakiisha ciidamaada ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka.
Ku xigeenka R/wasaaraah ahna wasiirka Gaashaandhiggaa mudane C/xakiim Maxamuud Xaaji Fiqi oo saxaafadda kula hadlay xaafadda Afrikaan Vilage ayaa sheegay inay ciidamaada dowladda Soomalaiya guul la taaban karo ka gaareen dagaallaada oo ay jab xooggan gaarsiiyeen kooxda Shabaab,waxa uuna tilmaamay inay socdan howlgallo dalka oo dhan looga nadiifinayo kooxdaasi.
Wasiirka Difaaca ayaa hoosta ka xariiqay inay jiraan 21-ruux oo iyagoo labisan dareeska ciidanka lasoo qabtay lana maxkamadeyn doono, isagoo dhanka kale shaaciyay horjoogeyal iyo maleeshiyaad maxaabiis ah oo lagu soo qabtay dagaallada.
Intaas kadib ayaa waxa ay wasiiradaasi kusoo lugeeyeen Xaafadda Afrikaan Village ilaa laga gaaro fagaaraha Tarabuunka,.
Wasiirka Warfaafinta Boostada iyo Isgaarsiinta C/kariim Xasan Jaamac oo saxaafadda kula hadlay fagaaraah Taribuunka ayaa ugu hambalyeeyay ciidamada qalabka sida guusha ay ka gaareen dagaallada waxa uuna rajo ka muujiyay in dib loo soo celiyo bilicdii ay laheyd fagaaraha Tarabuunka maadaama ay geedo qariyeen goobihii loogu talo galay madaxda iyo laamigii ay gaadiidka ciidamadu mari jireen.
Sidoo kale wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska oo isna la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay inay wasaaradiisu door muhiim ah ka qaadan doonto sidii dib u dhis ballaran loogu sameyn lahaa fagaaraha tarabuunka oo ahmiyad weyn u leh Bulshada Soomaaliyeed.
Goobihii aan tagnay ayaa waaxaa ka muuqday godad waaweyn oo ay kooxda la jabiyay ee Alshababa ka qodeen, iyadoo ciidamada qalabka sida ay duugeen, waxayna sidoo kale burbur xooggan gaarsiiyeen dagaallaada goobo muhiim ah oo ka tirsan degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag, kormeerkaan ay wasiirro ka tirsan dowladda ku tageen goobaha hore ee dagaalka ayaa ah mid ay ugu talo galeen inay ku dhiiro geliyan Ciidamaad qalabka sida ee Soomaaliya.
Tags: Government, Military news, Muqdisho, Soomaaliya
Somalia:Faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxeyso diyaaradihii lagu qabtay Aadna Cade Airport Libya War:NATO to prolong operation in Libya by 90 days